ဆယ်လူလာဘွန်း - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: ဆယ်လူလာ Bond
Tag Archives: ဆယ်လူလာ Bond
LiveU တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံများအတွက်ပထမဦးစွာပေါင်းစည်း 5G ဆယ်လူလာ Bond ယူနစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
LiveU ယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ newsgathering နှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားလွှမ်းခြုံ၎င်း၏သစ်ကိုအပြည့်အဝလိုက်နာ 5G LU600 ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရေး 5G modems နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်တင်နာ LiveU ရဲ့ဆုရ 6K HEVC နည်းပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ် 5G နှင့် 4G အားလုံးကိုခွဲ 4GHz ကြိမ်နှုန်း, ဖုံးအုပ်နှင့်တကွ, LU600 5G ဖောက်သည်အရှိဆုံး, အစွမ်းထက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထားဆယ်လူလာဂီယာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ရှမွေလသည် Wasserman, LiveU ၏ CEO & ...
LiveU နှင့် Griiip ထူးခြားသောတပ်အားကစားတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒေတာများ-Driven မီဒီယာဖြေရှင်းချက်ပလက်ဖောင်းမိတ်ဆက်
LiveU နှင့် Griiip ကုန်ကျ-ထိရောက်သော end-to-end ဗီဒီယိုနှင့်ဒေတာများပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးရန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များန်ဆောင်မှုများအတွက်ဖြည့်စွတ်ပြိုင်ကားစီးရီးအကြောင်းအရာဖြေရှင်းနည်းများကိုပေါင်းစပ်တစ်ခုတိုးချဲ့ပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပူးပေါင်းတပ်အားကစား programming ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဘို့ Griiip ရဲ့ဒေတာကိုအကြောင်းအရာဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝေးလံခေါင်သီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တည်ထောင်ရန် LiveU ရဲ့စွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနှစ်ခုအတိတ်နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီ ...
LIVEU IBC 2019 စမ်းကြည့်ရန်
LiveU ၏တည်နေရာ - 3.B62 LiveU ဖြစ်ရပ်အမျိုးအစားတိုင်းများအတွက်တိုက်ရိုက် newsgathering နှင့်ပြောင်းလဲနေသောအားကစားလွှမ်းခြုံများအတွက် 5G-enabled ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏အစုစုကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရပ်။ တိုကျိုမှာရှိတဲ့ 2020 ဂိမ်းများကိုဦးတည်ရှာဖွေနေ, LiveU ပြီးသားင်း၏ဆုရ HEVC နည်းပညာနှင့်အတူဖောက်သည်ရာပေါင်းများစွာကိုထောကျပံ့ဖို့အထိပြင်ဆင်ထားသည်။ IBC ပျေါလှငျတို့ပါဝင်သည်: CREATE: LiveU ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် LU4 600K HEVC HEVC 4K လယ်ကွင်းယူနစ် ...
LiveU ရဲ့ HEVC Bond Solutions နှင့်အတူ TVNZ အဆင့်မြှင့်မှုများ Newsgathering ရေယာဉ်စု
နယူးဇီလန်ရဲ့လေထုထုတ်လွှင့်, TVNZ အခမဲ့ဦးဆောင်, LiveU ရဲ့ LU300 HEVC နှင့် LU600 HEVC မှ LiveU ခရီးဆောင်ဂီယာယူနစ်၎င်း၏ရေတပ်အဆင့်မြှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယိုစွမ်းဆောင်ရည်သေချာသည်။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ဒေသတွင်း၌ LiveU ရဲ့ရေရှည်လက်တွဲဖော်, ဖြစ်ပွားနေသောဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုပံ့ပိုးပေးသောပစိဖိတ်တိုက်ရိုက်မီဒီယာကကြီးကြပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနယူးဇီလန်ထုတ်လွှင့် 2015 ကတည်းက LiveU သုံးပြီးပြီးပါပြီ ...
LiveU ကြီးထွားအရှိန်မြှင့်ရန် Francisco က Partners မှ Majority ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြေညာ
LiveU, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်အတူတကွပူးတွဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံ IGP မြို့တော်နှင့်အတူဆန်ဖရန်စစ္စကိုအပေါင်းအဖေါ်များတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာ-အာရုံစူးစိုက်ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာကုမ္ပဏီနောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုးချဲ့အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်၎င်း၏လက်ရှိရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် LiveU ဝယ်ယူကြပြီကြေညာဖို့ကျေနပ်သည်။ ၎င်း၏အသစ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှထောက်ခံမှုနှင့်အတူ LiveU ကုမ္ပဏီ၏ခိုင်ခံ့သောတိုးတက်မှုနှုန်းအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ LiveU အားဖြင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသောဖြစ်ပါတယ် ...
FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ် 10 အတွက် 2019 ပွဲများတစ်ဝှမ်း LiveU HEVC Technologies ကအသုံးပြုခြင်းလွှမ်းခြုံစှမျးတိုးချဲ့
ဂျာမနီရှိ ADAC ဝိုင်းရံကြဖို့ Deutschland မှာ LiveU ရဲ့နည်းပညာကိုတစ်ဦးအလွန်အောင်မြင်သောစမ်းသပ်နောက်ဆုံးသြဂုတ်လကနေအပေါ်ပြီးနောက် WRC Promoter GmbH သည်, ထို FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ်အပေါငျးတို့သစီးပွားဖြစ်ရှုထောင့်အဘို့တာဝန်ရှိင်သောကုမ္ပဏီ, 10 ဖြတ်ပြီး LiveU ရဲ့နည်းပညာကိုသုံးစွဲဖို့အထိလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဒီ rallies တစ်နှစ်။ LiveU ပြီးသားကိုဝိုင်းရံကြဖို့ Monte-Carlo နှင့်ပြိုင်ပွဲ၏တိုးမြှင်လွှမ်းခြုံဆောင်ကြဉ်းကူညီပေးခဲ့တယ် ...
စပိန်လိဂ်2နှင့်3ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလွှမ်းခြုံများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အသုံးချ LiveU
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်, တိုင်းပြည်အနှံ့ဖန်သားပြင်မှအားကစားဖြစ်ရပ်များဆောင်ခဲ့အထူးပြုတဲ့စပိန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီမကြာသေးမီကသေးသည်၎င်း၏အများဆုံးရည်မှန်းချက်ကြီးစီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးအဘို့အ LiveU လှည့်ပြီနှစ်ဦးစလုံးသည်ဒုတိယနှင့်တတိယဌာနခွဲဘောလုံး၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံ။ အဆိုပါသဘောတူညီချက် LiveU ရဲ့စပိန်ဖက်, ပန်းခြံ7ကကြီးကြပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , အလွတ်များနှင့်အသေးစားထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကွန်ယက်ကထောက်ခံ ...
အစီရင်ခံစာ LiveU 2018 '' တိုက်ရိုက်ပြည်နယ် ': HEVC အခုတော့ Worldwide မှယာဉ်အသွားအလာ၏ 25% ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်
အစီရင်ခံစာ LiveU ရဲ့နှစ်ပတ်လည် '' တိုက်ရိုက်ပြည်နယ် '' ယခု HEVC-encoded LiveU-generated အသွားအလာ 25% နှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းစံအဖြစ် HEVC protocol ၏ကြီးထွားလာသောကလေးမွေးစားခြင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကိန်းဂဏန်းများ, ရုရှား၌ဤနွေရာသီရဲ့ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား™မှာအများဆုံးထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်-grade ကိုဗွီဒီယိုအရည်အသွေးများအတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားရောင်ပြန်ဟပ်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နာရီကျော်နှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်ကျော်ကခြုံငုံတိုးလာကြပါပြီ ...
LiveU နည်းပညာကို အသုံးပြု. TwitchCon 2018 ကနေ Stream Live မှအကြောင်းအရာဖန်တီးရှင်များရာနှင့်ချီ
TwitchCon, စောင့်ကြည့်လေ့လာသင်ယူနှင့်အတူတကွကစားရန်အတူတကွ Twitch ဖန်တီးသူနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတို့ကိုစုဝေးစေ။ အဆိုပါ IRL (ရီးရဲလ်ဘဝမှာတော့) လှုပ်ရှားမှုနှင့်မိုဘိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များ၏မြင့်တက်လာမှုနှင့်အတူယခုနှစ် TwitchCon အရင်ကထက် ပို. ပင်အပြန်အလှန်အကြောင်းအရာရောက်စေဖို့ကတိပေးပြောကြားသည်။ LiveU, ထိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုမိုဘိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များအသက်ရှင်သော IP ကိုဗီဒီယိုက disruptor, 100 အကြောင်းအရာဖန်တီးသူထက်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်သွားကြဖို့မျှော်လင့် ...
FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ် LiveU HEVC နှင့်အတူ၎င်း၏တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံဖို့လတ်ဆတ်တဲ့ Dynamic ဆောင်ကြဉ်း
WRC Promoter GmbH သည်, ထို FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ်အပေါငျးတို့သစီးပွားဖြစ်ရှုထောင့်အဘို့တာဝန်ရှိင်သောကုမ္ပဏီ, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်က၎င်း၏ချီတက်ပွဲလွှမ်းခြုံဖို့လတ်ဆတ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုဆောင်ကြဉ်းကူညီရန် LiveU နည်းပညာကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ LiveU ရဲ့ LU600 HEVC ဖြေရှင်းချက်ကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်သည်, လေးရက်ကျော်ရာအရပျလုယူသောဂျာမနီမှာမကြာသေးမီက ADAC ဝိုင်းရံကြဖို့ Deutschland မှာအသုံးပြုခဲ့သည် ...